Shiinaha Raw Factory processing wax soo saarka, qeybiye processing alaab-qeybiye
Taxanaha HD Motion Multi-Directional Motion
Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa isku darka alaabada budada qalalan ee dawooyinka, kiimikada, cuntada iyo warshadaha kale. Waxay sidoo kale isku dari kartaa dhowr nooc oo walxo ah oo leh culeys gaar ah oo gaar ah iyo cabirka walxaha si deg deg ah oo siman, iyadoo isku darka isku darka ilaa 99%
YK Taxanaha Swing Nooca Granulator
Mashiinka waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa daawooyinka, warshadaha kiimikada, cuntada iwm. Waxay ka dhigi kartaa wax fiican budada qashin qubka, sidoo kale waxay burburin kartaa qalabka qallalan ee qaab-dhismeedka ah.
Taxanaha WF-B Boorka Uruurinta Set
Mashiinka ayaa ku habboon kiimikada, dawooyinka, cuntada iyo warshadaha kale, burburin iyo boodh oo ka mid ah qalabka wax lagu burburiyo.
Taxanaha WF-C burburin Set
Mashiinka wuxuu ku habboon yahay burburinta qalabka kiimikada, dawooyinka iyo warshadaha cuntada.
ZS Taxanaha Mashiinka Baadhitaanka Sare
Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay dawooyinka, kiimikada, cuntada iyo warshadaha kale si loo kala saaro cabirka maaddada budada qalalan.
HGD Taxanaha Mashiinka Isku-Wareegga
Mashiinkaan waxaa badanaa loo adeegsadaa isku dhafka granule granule, granule leh budada, budada budada ah iyo qalabka kale ee diyaarinta adag ee soosaarida warshadaha dawooyinka. Waxay leedahay faa'iidooyinka dufcad ballaaran, xoog lagu kalsoonaan karo, hawlgal deggan iyo wixii la mid ah. Waa qalabka ugu habboon ee warshad daroogada la isku qasin karo. Isla mar ahaantaana dawooyinka, kiimikada, cuntada iyo warshadaha kale ee si ballaaran loo isticmaalo.
HZD Taxanaha otomaatiga Hopper fiicni
Mashiinka ayaa si otomaatig ah u dhameystiri kara dhamaan ficilada sida qaadista, isku haynta, isku darka, iyo hoos u dhigida. Ku qalabeysan mashiinka wax lagu qaado ee otomaatiga ah iyo jibbaarada isku dhafan ee kala duwan, wuxuu la kulmi karaa shuruudaha isku dhafka ee tiro badan iyo noocyo badan. Waa qalab ku habboon isku-darka wadarta warshadaha dawooyinka. Isla mar ahaantaana, waxaa si weyn loogu isticmaalaa dawooyinka, kiimikada, cuntada iyo warshadaha kale
HTD Taxanaha Safka Mashiinka Mashiinka
Mashiinka wuxuu leeyahay shaqooyinka wiishka otomaatiga ah, isku dhafka, iyo hoos u dhigida. Ku qalabeysan hal fiicni iyo qasabbo kala duwan oo isku dhafan oo qeexitaanno kala duwan ah, waxay la kulmi kartaa shuruudaha isku-dhafka ee noocyo badan iyo dufcado kala duwan. Waa qalab ku habboon isku-darka wadarta warshadaha dawooyinka. Isla mar ahaantaana, waxaa si weyn loogu isticmaalaa dawooyinka, kiimikada, cuntada iyo warshadaha kale.
RXH Taxanaha Hawada Hawada Kululaynta
Waxaa si weyn loogu isticmaalaa kululaynta iyo baabiinta alaabta ceyriinka ah iyo soo saarista dawooyinka, kiimikada, cuntada, warshadaha fudud iyo warshadaha culus iwm.
HLSG Taxanaha Shear High Mixing Granulator
Mashiinka waxaa loo codsadaa isku dhafka awoodda, qashin-qubka iyo dhajiska dawooyinka, kiimikada iyo beeraha cuntada.
Mashiinka Dahaarka Taxanaha BG-E
Mashiinka waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa in lagu daboolo kiniinno kala duwan, kaniiniyada iyo macmacaanka leh filim dabiici ah, filim biyo-ku-milma iyo filim sonkor ah iwm. wax qabad sare, isticmaalka tamarta oo hooseeya iyo aag dabaq yar, iwm.
Taxanaha DPL-ga Dheecaanka Dheecaanka Wax-qabadka Badan
Mashiinka waxaa lagu qalabeeyaa nidaamyada buufinta sare, hoose, iyo dhinaca, taas oo garan kara howlaha sida qalajinta, xoqidda, xoqida, iyo pelletizing. Mashiinkaani waa mid ka mid ah qalabka geedi socodka wax soo saarka ee diyaarinta adag ee warshadaha dawooyinka. Badanaa waxaa lagu qalabeeyaa machadyada cilmi baarista iyo shaybaarada shirkadaha waaweyn ee dawooyinka iyo kuliyadaha caafimaadka, waxaana loo isticmaalaa sameynta wax soo saarka iyo hababka daawada ee daawooyinka, kiimikada, iyo warshadaha cuntada. Cilmi baaris iyo horumarin tijaabooyin wax soo saar.